Taliska Ciidamada Oo Ka hadlay Weerarka Al-shabaab Ee Bariire – Hornafrik Media Network
Taliska Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa markii ugu horaysay faah faahin ka bixiyay dhinacooda Dagaal ay Saaka Alshabaab ku soo qaadeen Fariisimo ay Ciidankoodu ku leeyihiin Deegaanka Bariire ee Gobalka Shabeelaha Hoose.
Gen Sheegow Axmed Cali- Taliyaha Guutada 20-aad ee Ciidanka Xoogga oo la hadlay Warbaahinta ku hadashay Afka Dowladda Somalia ayaa sheegay in Ciidankoodu ay si buuxda haatan gacanta ku hayaan Deegaanka Bariire, Wuxuuna qiray in Saaka la soo weeraray Ciidankooda, balse waxa uu sheegtay inay guulo ka gaareen Dagaalkaasi.
Gen Sheegow waxaa uu sheegay in markii ay Alshabaab Aagga 1-aad ee Ciidanka Culays soo saareen goobtaasi looga dilay 18 ka tirsan Maleeshiyaadkooda oo uu sheegay inay ku jiraan Saraakiil, kadibna ay ku jabiyeen Dagaalkaasi, isla markaana ay ka furteen Hub fara badan oo ay ku dagaalamayeen Alshabaab.
Mar la waydiiyay Gen Sheegoow waxa ka jira sheegashadda Alshabaab ee ah inay ka qabsadeen Ciidanka Milatariga Gaadiid Dagaal, wuxuu sheegay inay jiiteen 3 Gaari oo halaysnaa oo ay lahaayeen Ciidanku.
Sheegoow waxa uu sheegay in Gurmad ahaan uu ugu yimid Abaanduulaha Ciidanka Xoogga, isla markaana ay hadda ku daba jireen firxadkii Alshabaab ee u baxsaday dhinaca Sabiib iyo Caanood.
Dhinac kale, Afhayeen u hadlay Kooxda Alshabaab ayaaa sheegtay iyana dhinacooda inay ka dileen Ciidamadda Xoogga 17 Askari, isla markaana ay ka furteen Hub Farabadan, Saanad Ciidan, iyo Gaadiid Dagaal.
Ka sakoow sheegashooyinka Labada dhinac ma jiraan Illo Madax banaan oo xaqiijin kara siday wax uga dhaceen Deegaanka Bariire, iyadoona inta badan Shacabkii ay halkaasi isaga barakaceen.
Halkan ka dhagayso Codka Gen Sheegoow